Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo culus oo cadawga lagu qaaday iyo Gulufyadii Ramadaanka oo bilowday
Dagaalo culus oo cadawga lagu qaaday iyo Gulufyadii Ramadaanka oo bilowday
Posted by ONA Admin	/ July 11, 2013
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo ciidamada gumaysiga lagunaafeeyay dagaaladan oo kadhacay meelo kaladuwan waxay udhaceen sidan.
20/6/13 deegaanada Gabola oo Dhanaan u dhaw iyo Gobayo oo Fiiq u dhaw dagaalo ku dhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faah-faahintiisa lahaynin.
21/6/13 Adhiyo oo dagmada Garbo ee gobolka Nogob katirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari tiro kalana waa lagadhaawacay.
25/6/13 Maandooyalay iyo Gol-caanood oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar kawada tirsan waxaa ciidanka qabka jabsan ee gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faah-faahintiisa lahaynin.
26/6/13 Quruuraxle oo Garbo katirsan dagaal adag oo kudhexmaray N/hurayaasha CWXO iyo kuwa gumaysiga ee doolka kujooga ciida ogadenia waxaa ciidanka wayaanaha halkaas lagaga dilay 15 askari 12 kalana waa lagadhaawacay.
26/6/13 Dooyo-khadaro oo Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka dulmiga ku jooga wadanka Ogadenia ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagadhaawacay.
29/6/13 Qalqalooc oo Garbo udhaw waxaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfahin lagahaynin. Isla 29/6/13 Xidh-yare oo dagmada Garbo udhaw waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa laga dhaawacay.
30/6/13 Qalqalooc oo dagmada Garbo katirsan waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagadhaawacay.
29/6/13 Caloola-cad oo dagmada Dhuxun ee gobolka Nogob katirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa laga dhaawacay.
4/7/13 Hagoogane oo Caado katirsan dagaal ku dhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga waxaa ciidanka nacabka lagaga dilay 5 askari 2 kalana waa lagadhaawacay.